China 1,6-Hexanediol fekitori uye vagadziri | Zhongrong
1, 6-hexadiol, inozivikanwawo se1, 6-dihydroxymethane, kana HDO muchidimbu, ine molekyumu fomula yeC6H14O2 uye mamorekuru uremu hwe118.17. Kumba tembiricha yemukati, iyo chena ine waxy yakasimba, yakanyungudika mu ethanol, ethyl acetate nemvura, uye ine yakaderera chepfu.
Molecular fomura: C6H14O2
Brand: Zhongrong Technology
Mavambo: Tangshan, Hebei
Molecular uremu: 118.17400
Kuwandisa: 1.116 g / ml (20 ℃); 0.96 g / ml (50 ℃)
Morphology: 20 ℃ - chena waxy hygroscopic solid; 50 ℃ - Transparent mvura
Mamiriro ekuchengetedza: -30 ℃ (yakadzika tembiricha chengetedzo)
Chigadzirwa: GB / T 30305-2013 Zvakanakisa zvigadzirwa
Tsika Yekodhi: 2905399090
Kurongedza Specification: dhiramu / hombe (tani)
Maumbirwo e1, 6-hexadiol ane maviri ekupedzisira eprohydroylyl mapoka ane yakakwira chiitiko, izvo zvinoita kuti zvive nyore kugadzirisa nema organic acids, isocyanates, anhydride uye mamwe maasidhi kugadzira mhando dzakasiyana dzezvinobva.
1, 6-hexadiol chinhu chakakosha chemakemikari zvinhu, izvo zvinonyanya kushandiswa kuburitsa inoshanda monomer yechiedza kurapa kupfeka, polycarbonate polyol uye polyester indasitiri.Seketani extender inoshandiswa mune yekugadzira yeganda uye yekunamatira munda; Polyesters ekugadzira machira (iron plate kupfeka, coil kupfeka, kupfeka kweupfu); Synthetic mishonga, kunhuhwirira kwepakati 1, 6- dibromohexane nemamwe masango.
1, 6-hexanediol inorongedzwa mudhiramu yesimbi yemudziyo wakasimba, wakaoma uye wakachena 200L. Iyo yekumusoro muromo weiyo dhiramu yakavharidzirwa ichavharidzirwa ne polyethylene kana isina kuchena yerabha mhete kudzivirira kuvuza .Kana mu25L rakarukwa bhegi, rakarukwa bhegi rinofanira kuve rakarongedzwa ne PE zvinhu firimu, sunga muromo ne tambo chisimbiso.Product hombe midziyo inofanirawo sangana nezvinodiwa pamusoro.
Imba yekuchengetera inofanira kunge iri inotonhorera, yakaoma, mweya, isina chiratidzo-chivakwa.Zvivakwa zvekuvakisa zvinonyatsorapwa kurwisa.Warehouse tembiricha ≤30 ℃, mwando ≤80% .Ramba kure nekupisa sosi, simba sosi uye moto sosi. madhoo nemaWindows, masherufu anofanirwa kucheneswa nguva dzose kuti zvirambe zvakachena.Kurongedza kwacho kwakanyatsovharwa uye kuri mumamiriro akanaka, isina hunyoro uye kusvibiswa.Sinofanira kuchengetwa zvakasiyana neacidantid, inodzora mumiririri, acid chloride, acid anhydride, chloroformate, nezvimwe. Imba yekuchengetera ine zvigadziri zvemoto, hosi yemoto, pfuti dzemoto uye mimwe midziyo yemoto yemvura.Iyo nzvimbo yekuchengetera inofanirwa kuve yakagadzirirwa zvigadzirwa zvekudonha
Inofanirwa kunge ichitakurwa nemotokari dzine makemikari ekufambisa makemikari; Vanotyaira uye vanoperekedza vanofanirwa kuve nezvinowirirana zvinoenderana nemarezenisi akazara. Mota dzekutakura dzinofanirwa kuve nemhando dzinoenderana uye huwandu hwemidziyo yekudzimisa moto nemidziyo yekurapa nechimbichimbi yekudonhedza. uye kurodha kunofanirwa kuve kwakachengeteka kana kwaendeswa.Iva nechokwadi chekuti midziyo haidonhe, kudonha, kudonha kana kukuvara panguva yekufambisa.Usasanganise ne oxidant, inoderedza mumiririri, acid chloride, anhydride, chloroformate.Ichengetedzwe kubva kuzuva, kunaya uye kupisa kwakanyanya. Gara kure nemoto, kupisa uye kwakanyanya tembiricha nzvimbo panguva yekumira.Zvinorambidzwa kushandisa michina michina uye maturusi ayo anowanzoita seanopenya.Migwagwa yekufambisa inofanirwa kutevedzera nzira yakatemwa, usagare munzvimbo dzinogarwa uye munzvimbo dzine vanhu vazhinji.
Chengetedzo: GHS njodzi chikamu: Zvinoenderana neGG30000 yakateerana standard yeChemical Classification uye Labeling Specification, chigadzirwa ichi ndechemhando 2B ine kukuvara kwemaziso kwakakomba / kutsamwa kweziso .. Zvakanyanya huturu - Percutaneous, mukirasi
Pashure: Ethyl Acetate （≥99.7%）
Zvadaro: 75% Doro Disinfectant muIBC / Drum